अधिकांश पुरुषले महिलालाई राम्री र नराम्रीको कोटीमा विभाजन गर्छन् । तर स्वयम् महिलाले आफूलाई अथवा आफ्नो वर्गलाई कसरी हेर्ने गर्छन् ? समाजमा र विश्वमा यो वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? हाम्रो समाजमा पुरुष र महिलाको निर्माण कसरी गरिन्छ ? अध्येता तथा विश्लेषक सावित्री गौतमसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले कुरा गरेका छन् । गौतमसँग गरिएको कुराकानी ‘नेपाली महिला र सङ्घर्ष, सुन्दरता र सौन्दर्य प्रशाधन, विवाह, परिवार र महिला, वेश्यावृत्ति र समाज, यौन उद्योग र महिला तथा डोनाल्ड ट्रम्प र महिला मार्च’ उपशीर्षकमा छन् ।
पाठकका लागि अन्तर्वार्ता लामो लाग्न सक्छ, तर बहसका लागि यो सामाग्री राखेका छौँ । नेपाली महिला र सङ्घर्ष